Ebe nchekwa ihe bara nnukwu uru - IntoKildare
Ihe Zoro Ezo
Enwere ọitementụ dị ukwuu n'ịchọta ahụmịhe nke na -adị ka ndị njem siri chọpụta ma ọ bụ achọpụtabeghị ha.
Ma ọ bụ ihe dị oke ọnụ ahịa zoro ezo dị ka oke ọhịa, mkpọmkpọ ebe akụkọ ihe mere eme na ụlọ oge ochie na -ezo n'okporo ụzọ a kụrụ akụ, enwere ike ịchọta ụfọdụ oge njem na -agaghị echefu echefu na nke pụrụ iche mgbe ị si n'akwụkwọ ntuziaka pụọ.
21 nsonaazụ (s)
Ụgbọ mmiri ntụrụndụ Athy Blueway na ihe omume
Nwee obi ụtọ ụgbọ mmiri Peddle, Zorbs mmiri, Bungee Trampoline, ụgbọ mmiri ụmụaka ụmụaka n'akụkụ nnukwu ọwa mmiri dị na Athy. Wepụta ụbọchị na-agaghị echefu echefu na ihe omume ụfọdụ na-atọ ụtọ na mmiri dị n'akụkụ […]
Oollọ & Ubi Coolcarrigan
Coolcarrigan bụ ohia zoro ezo yana ogige 15 acre mara mma nke jupụtara na obere osisi na okooko osisi dị egwu.
Ọ dị na saịtị ebe St Brigid onye na -elekọta Kildare hiwere ebe obibi ndị mọnk na 480AD. Ndị ọbịa nwere ike lelee katidral dị afọ 750 wee rịgoro Round Tower nke kachasị elu na Ireland nwere ohere ọha.